Waraana Sooriyaa: Tarkiin baqattoota Sooriyaa hin keessummeessitu jedhan Erdoogaan - BBC News Afaan Oromoo
Waraana Sooriyaa: Tarkiin baqattoota Sooriyaa hin keessummeessitu jedhan Erdoogaan
Pireezidaantiin Tarkii Reesiip Taayyip Erdoogaan biyyisaanii kan booda "baqattoota haaraa" Sooriyaarraa dhufan akka hin keessummeessine himan.
Namoonni kumaatamatti laakka'aman gara daangaa Tarkii imaluu isaaniitiin naannoon kaaba-lixa Sooriyaa kan hidhattootaan to'atame Idliib keessatti dhiibbaan akka heddumaatuu taasiseera.
Tarkiin hanga ammatti baqattoota Sooriyaa miiliyoona 3.7 ta'an kan simatte yoo ta'u addunyaarratti lakkofsa baqattoota isa guddaati.
Obbo Erdoogaan akka jedhanitti adeemsi baqattootaa haaraa kun biyyasaanii qofa osoo hin taane "biyyoota Awurroppaallee kan yaaddessudha" jedhaniiru.
Naannoo Idliib yoo xiqqaate namoonni miiliyoona sadi ni jiraatu. Kunis naannoolee ijoo ta'an keessaa naannoo finciltootaafi jihaadistootaan hanga ammaatti warri pireezidaant al-Asaad morman qabataniidha.
Erdoogaan maal jedhani?
Sirna badhaasaa gaafa Dilbataa Istaanbuul keessatti geeggeffamerratti kan dubbatan pireezidaant Erdoogaan akka jedhaniiru: namoonni 80,000 ol Idliib irraa baqachuun gara Tarkii imaluuniiru. Kun ammoo biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jira.
Biyyatiin kan booda humna baqattoota haaraa biraa keessummeessitu hin qabdu jedhaniiru.
Tiraamp Sooriyaatti IS mo'achuu irratti xiyyeeffatu
"Yoo dhiibbaan ummattoota Idliib irratti godhamaa jiru hin dhaabatu ta'e lakkofsi kun ammallee ol ka'a. Sababa kanaan Tarkiin kophaashee baqattoota kana hunda keessummeessuu hin dandeessu," jedhaniiru.
"Dhiibbaan kun biyyoota Awurooppaallee ni dhaqaba, keessumaayyuu Giriik," jechuun yaada dabalata kennaniiru.
Haalli amma jiru kun hin fooyya'u yoo ta'e bara 2015'tti kan mudate irra deebi'ee mudachuu danda'a jedhaniiru pireezidant Erdoogan.
Gaafa Wixataa bakka buutoonni Tarkii dhimmicha mari'achuuf gara Moskoow deemuuf akka ta'an himaniiru.
Tarkii maal barbaaddi?
Tarkiin baqattoota "iddoo nagaa" kaaba-baha Sooriyaa kan loltoota Kurdiitiin qabame akka deebi'an barbaaddi.
Erdoogaan karoora gargaarsa biyyoonni akka dhiheessan gaafataniiru, ta'uu baannaan baqattoonni Sooriyaa akka gara Awurroppaa imalaniif haala mijeessuuf akka dirqaman dubbataniiru.
"Biyyoonni Awurroppaa tarkanfii Tarkiin Sooriyaarratti fudhatte qeequurra humna isaanii guutuun ajjeechaa Idliib keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabatuuf hojjachuu qabu ," jedhaniiru Pirezidaant Erdoogan.
Jeequmsa Sooriyaa: Tiraamp loltoota IS sooriiyaa mo'achuu irratti xiyyeeffannon hojjetu jette Linsii Giraam